VaTsvangirai Vosimbaradza Nhengo Dzavo neMashoko
Gunyana 24, 2013
HARARE — Mutungamiri wemdc huru, VaMorgan Tsvangirai, vanoti nhengo dzebato ravo hadzifaniri kuwora moyo nekusungwa, kushurungurudzwa nemapurisa kana kubirwa sarudzo vachiti dzinofanira kuramba dzakashinga munyaya yekurwira shanduko munyika.
VaTsvangirai vataura mashoko aya pamuzinda webato ravo weHarvest House muHarare, apo vasangana nenhengo dzebato ravo makumi maviri neimwe idzo dzakasunungurwa nedare repamusro svondo rapfuura.
Vanhu ava vaipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mupurisa, VaPetros Mutedza, kuGlen View muna 2011.
Vanhu ava ndevamwe venhengo dzeMDC makumi maviri nevapfumbawe vakasungwa muna 2011.
VaTsvangirai, avo vange vaine munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano, VaNelson Chamisa, nemunyori anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu, Amai Lucia Matibenga, vati vanhu ava vakasungwa nekuti vange vakasimba panyaya dzekushandira musangano weMDC.
Vanhu ava vakagara mutirongo kwenguva inodarika gore uye VaTsvangirai vati izvi hazvifaniri kuvadzorera kumashure panyaya dzekurwira shanduko.
Vaenderera mberi vachiti hondo dzese dzeshanduko dzine zvinokanganisika asi vanhu vanofanira kushingiriri dzamara zvanaka.
VaTsvingirai vatiwo chero zvikaoma sei bato ravo richaenderera mberi nechinangwa charo chekuunza shanduko munyika.
VaTsvangirai vati vanovimba kuti dzimwe nhengo dzechikwata ichi idzi dzakanzi nedare repamusoro dzitongwe nenyaya yekufa kwaVaMutedza dzichawanikwa dzisina mhosva.
Zvichakadai, Amai Matibenga vazivisa kuti nhengo dzebato iri dzese dzichaonekwa navamazvikokota nemusi weChina kuti dzikwanise kutambira zvakaitika uye kuti dzikwanise kuenderera nehupenyu hwadzo sezvadzaiita dzisati dzasungwa nekukandwa mutirongo kwenguva yakareba.